खुल्ला ठाउँमा नहग्नुस् मेरो चर्पीमा स्वागत छ ! - Wash Khabar
खुल्ला ठाउँमा नहग्नुस् मेरो चर्पीमा स्वागत छ !
२७ भाद्र २०७६, शुक्रबार १६:५४ 352 पटक हेरिएको
 विनोद शर्मा, सिन्धुपाल्चोक ।
नेपाललाई नैं यहि असोज १३ गते खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिँदैछ । मेरो र हामी जस्तै सबै परिवारमा चर्पी बनेर प्रयोगमा आइसकेपछि खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न लागिएको हो । स्वच्छ सफा हाम्रो देश नयाँ युगमा भयो प्रवेश भने झैं घोषणापछि साँच्चै नेपालले पूर्ण सरसफाइ तर्फको यात्रा गर्नेछ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पनि भदौ २० गते ६८ औं जिल्लाका रुपमा खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भयो । घोषणा समारोहमा १३ बुँदे आचरसंहिता निर्माण गरी पालना गर्ने प्रतिवद्धता
समेत गरिएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने भनेर समारोहका प्रमुख अतिथि खानेपानी मन्त्री, सांसद, गाउँपालिका नगरपालिका प्रमुख लगायतका अतिथिहरुले हस्ताक्षर समेत गर्नु भएको छ । उक्त आचारसंहिताको पहिलो बुँदामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला हो, यस खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्रमा कसैले खुल्ला दिसा गर्न पाउने छैन लेखिएको छ ।
३ नम्बर बुँदामा यो जिल्लामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरुलाई दिसापिसाब गर्नु परेमा समुदायमा रहेका चर्पी वा व्यक्तिको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यहि बुँदासँग सम्बन्धित मेरो सानो अनुभव यहाँ उल्लेख गर्दैछु । हुन त बुँदा नम्बर ९ मा जिल्लाभित्र धेरै मानिसहरु जमघट हुने अवस्था, साँस्कृतिक मेलापर्वमा अस्थायी चर्पी निर्माण गरी प्रयोग गर्ने गराउनेछौं पनि भनिएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन भन्दा पनि हाम्रो संकुचित मानसिकताका बारेमा केहि लेख्न खोजेको छु ।
घोषणा कार्यक्रममा सहभागी भएर भोलीपल्ट म मेलम्ची फर्कनु पर्ने थियो । २१ गते विहान चौतारा बसपार्कबाट मेलम्चीका लागि बस चढें । साँगाचोकनिर पुगेपछि पेट कटक्क काट्यो । चर्पी जानु पर्ने भयो । साँगाचोक बजारसम्म पुगें । तर त्योभन्दा अगाडी जानसक्ने आँट भएन । जिरोकिलोसम्मका लागि पैसा तिरे पनि झर्नु पर्ने भयो । बसका सहचालकलाई केहि नभनी झरें र चर्पीको खोजिमा लागें । साँगाचोकमा सार्वजनिक चर्पी रहेनछ । नजिकैको एउटा पसल सहितको घरमा पसें ।
पेट दुखेर गाह्रो भएको छ तपाईको चर्पी प्रयोग गर्न सक्छु भनि अनुरोध गरें । पसलेले चर्पी बन्द छ भनेर अन्तै जान आग्रह गरे । जिल्लास्तरको प्रतिवद्धता सुनाएर ती पसलवालासँग बहस गर्ने मन थियो । हग्न हतार भएका कारण पसलवालासँग बहस गर्नु भन्दा चर्पी खोज्नु पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो । खुल्ला दिसा नगर्ने प्रतिवद्धता गरेको मलाई अब फसाद प¥यो । अरु घरमा गएर बिन्ति बिसाउने की खुल्ला ठाउँमैं हगेर आफ्नो समस्या समाधान गर्ने भन्ने भयो । मैंले दोस्रो बिकल्प रोजें ।
मैंले गल्ती गर्दैछु भन्ने महशुस गर्दा गर्दै पनि मसँग बिकल्प थिएन । न वरिपरी सार्वजनिक चर्पी थियो । न अरु घरमा गएर छलफल गर्ने समय नैं । बिकल्प सकिएपछि अन्ततः खुल्ला ठाउँमा हगें । चर्पीमा हगेको भए दिसा गरें भनेर गर्वका साथ भन्थेंहोला । मैंले आफैंले भोगेको भएर यी कुराहरु लेखिरहेको छु । सायद मलाइ नपरेको भए आजै यति कुराहरु लेख्दिन थिएँ होला ।
चौतारा नगरपालिका वडा नम्बर ४ कुबिण्डेमा मेरो घर पनि बाटोको छेउमा छ । चर्पी पनि बाटोको छेउमैं छ । मेरो बुबा आमाले चर्पीमा कहिल्यै ताल्चा लगाउने गर्नु भएको छैन । बाटो हिड्दा कसैलाई अप्ठेरो पर्दा काम लाग्छ भन्ने संस्कार मैंले पनि सिकेको छु । मुलबाटो भएर ओहोर दोहोर गर्ने सबैका लागि हाम्रो चर्पीको ढोका सधैं खुल्ला छ ।
गाउँमा यस्तो समस्या अलि कम छ । किनभने उनीहरु स्वार्थी भैसकेका छैनन् । शहर वा शहरउन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु अलि पढेलेखेका पनि छन् । घर चर्पी पनि चिटिक्क परेको बनाएका छन् । तर मानवीयता भने कम हुँदै गएको छ । बरु म चर्पी प्रयोग गरेपछि सफा गर्न तयार थिएँ । त्यो मौका मैंले पाइन । मजस्ता अरु धेरैले यो समस्या भोगि सक्नु भएको छ । शहरी क्षेत्रका व्यक्तिहरुमा पानी हाल्न र सफा गर्न लगाएरै भए पनि चर्पी प्रयोग गर्न दिने मानसिकता विकास हुन बाँकी छ । अप्ठेरोमा परेको भएरै उसले सहयोग मागेको हो भनेर बुझ्ने क्षमता शिक्षित मानिसमा त झन् हुनु पर्ने हो ।
तपाईको घरमा चर्पी प्रयोग गर्न माग्ने मान्छे कि अरु घरमा पुग्ला नभए नजिकैको खुल्ला ठाउँमैं हग्ने हो । मानिसको एक ग्राम दिसामा एक करोड भाइरस, दश लाख व्याक्टेरिया, एक हजार परजिवी र एक सय वटा जुकाको फुल हुन्छन् । एक जनाले एक पटकमा औसतमा २ सय ५० ग्राम दिसा गर्छ भनिन्छ । एक जनाले एक पटक गरेको दिसाबाट कति जनालाई रोग लाग्न सक्ने रहेछ भनेर यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । आफ्नो घरमा चर्पी छ भन्दैमा सुरक्षित छु भन्ने भ्रमलाई सबैले त्याग्नु पर्छ की । हाम्रो घर छेउमा गरेको खुल्ला दिसाका कारण हामी नैं बढी जोखिममा रहन्छौं ।
आफ्नो चर्पी अरुलाई प्रयोग गर्न दिन्न भन्न पाइन्छ । यसमा अरुले हस्तक्षप गर्ने कुरा हुँदैन । तर अप्ठेरोमा परेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि भुल्नुहुँदैन । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएर पूर्ण सरसफाइको एउटा सूचक पुरा भएको छ । तर शहरी क्षेत्र तथा केहि विद्यालयामा गु लुकाउने व्यबस्था गर्न अझै बाँकी छ । शहरी क्षेत्र, बसपार्क, बस बिसौनी, हाटबजार लाग्ने ठाउँहरुमा सार्वजनिक चर्पी र पानीको उपलब्धता गराउनु जरुरी छ ।
चर्पी बनाएर प्रयोग गरीरहेका घरधनीलाई पनि पूर्ण सरसफाइयुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि उनीहरुको कर्तव्य वा उनीहरुले गर्न सक्ने योगदानका बारेमा अभिमुखिकरण गर्नुपर्छ । गु लुकाउने अभियानमा उनीहरुको योगदानका लागि प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । जिल्लामा गरिएको प्रतिवद्धतासँगै मेरो थप प्रतिवद्धता छ, खुल्ला ठाउँमा नहग्नुस् हाम्रो चर्पीमा स्वागत छ । सबै परिवारले यहि प्रतिवद्धता गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाललाई खुल्ला दिसामुक्त मात्रै होइन छिट्टै पूर्ण सरसफाइयुक्त राष्ट्र समेत घोषणा गर्न सकिन्छ ।
नोट : यो लेखकको निजी बिचार हो । यसमा सम्पादक जवाफदेही हुनेछैन ।
बिप्पेलेकमा मिटर सहितका धारा
सफ्टवेयर मार्फत वासको डाटा
बडिमालिका ९ छाउगोठमुक्त वडा
बंगलाचुली गाउँपालिकामा पूर्ण सरसफाइ
तयार भयो झापा जिल्लाको
तमोर नदीको पानी कुम्मायक
वासको तथ्याङ्क संकलन गर्न स्थानीय तहमा वास इकाई स्थापना हुने
विकास साझेदारलाई खानेपानी सचिवको आग्रह ‘वासको डाटा संकलन गर्न सघाउनुहोस्’
सरसफाइमा आई.एस.ओ मापदण्ड बारे महालक्ष्मी नगरपालिकाले थाल्यो सरोकारवालासँग छलफल
मेलम्ची खानेपानी असार भित्रै काठमाडौमा : मन्त्री मगर
सफ्टवेयर मार्फत संकलित वासका तथ्याङ्क यसरी हेर्नुहोस् (भिडियो)
सफ्टवेयर मार्फत वासको डाटा अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् (भिडियो)
बडिमालिका ९ छाउगोठमुक्त वडा घोषणा
बंगलाचुली गाउँपालिकामा पूर्ण सरसफाइ अभियानले गति लिदै
तयार भयो झापा जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन, ५ वर्षभित्र सफा र स्वच्छ क्षेत्र बनाउने
तमोर नदीको पानी कुम्मायक मन्दिरमा उक्लियो
मानव मलमूत्र व्यवस्थापनमा देशकै नमुना बन्दै महालक्ष्मी
सुरक्षित पानी उपभोग गर्ने साँगाचोकगढीका २२ सय घरको सपना पूरा हुँदै